नोभेम्बर 26, 2016 नोभेम्बर 7, 2018 साइन्स इन्फोटेक2Comments बलि राजा, मोदनाथ प्रश्रित
को थिए बलि राजा ? दिदीबहिनी दाजुभाइको प्यारो मिलनको चाड तिहारको अर्को रमाइलो पक्ष देउसी भैलोको नाचगान पनि हो । देउसी भैलो खेल्न युवन र केटाकेटी मात्र होइन, बूढै उमेरका मान्छे पनि रौसिन्छन् । टोली नाइकेले लयखार ढड्ढमा नाटकीय शैलीले भट्याउने र सहभागीहरूले देउसिरे, भैलो, भैलीराम् घन्काउँदै सामूहिक रूपमा नाच्ने चलन नेपालको मौलिक विशेषता हो । नाच्ने क्रममा घरपरिवारलाई सुखसमृद्धिको शुभकामना दिंदै यस घरको मन ठूलो छ हात ठूलो छ, देउसे भैलेलाई मुठीखोलेर पैसा दिन्छन्, मिठामिठा परिकार दिन्छन् भनी खूब फुक्र्याइन्छ । त्यसै क्रममा हामी त्यसै आएका हैनौं, बलिराजाले पठाको । आपत पर्‍यो बलि राजालाई, सहयोग माग्न आएको पनि भन्ने गरिन्छ ।
को थिए ती बलि राजा ? कुन मुलुकका र के सङ्कट पर्‍यो ? के नेपालमा गणतन्त्र आउँदा राजा ज्ञानेन्द्रलाई आपत परी नार्गाजुनको बास माग्ने अवस्था जस्तै भएको थियो तिनलाई ? कुन जुगका थिए ती ? कि जहिले पनि तिनले पठाएको भनेर पैसा मागिन्छ ? म हरेक तिहारमा यस्तै प्रश्नले ठट्टा गर्छु, देउसे भैलेहरू खिस्स हाँस्छन् बस् । यसपालि राजा ज्ञानेन्द्र दरबार छाडेर जाँदा बिजुली, पेट्रोल डिजल आदिको लाखौं, करोडौं रुपियाँ दरबारले नतिरेको चर्चा आयो । प्रसङ्गवश बलिराजाको पुरानो कथा कोट्याउन मन लाग्यो ।
-अति सुन्दरी भएकीले सीताको हरण भयो, अति घमण्डी हुनाले रावण मारियो, अति दानी हुनाले बलि बन्धनमा परे, त्यसैले कुनै कुरामा पनि अति नगर्नु ।) राष्ट्रको अति शोषण, गरिब वर्गको अति उपेक्षा लोकतन्त्र न्याय र अधिकार निम्ति आन्दोलन गर्ने जनताको अति दमनको कारणले तीन चार हजार वर्ष पुरानो नेपालको राजतन्त्र परम्परा भर्खरै समाप्त भएको विश्वले देख्यो ।
देव, दानव, असुर मूलतः एउटै पुर्खाका शाखा सन्तान थिए । टाढाटाढासम्म फैलिदै भएपछि जमिन, जड्ढल, पानी पशु आदि कारणले परस्पर विरोध बढ्दै र एउटा पक्षले अर्को पक्षमाथि आक्रमण गरी गाई वस्तुदेखि, गाउँ वस्ती र राज्यसमेत कब्जा गर्ने होड बढ्दै गयो । कहिले समुद्र मन्थन जस्ता साझा उत्पादनका कुरा देवपक्षले लुट्थ्यो, कहिले देवपक्षको सम्पत्ति र स्वर्ग असुर पक्षले कब्जा गथ्र्यो । यस्तै प्रतिस्पर्धामा दानव कुलका शक्तिशाली राजा बलिले इन्द्रको स्वर्ग कब्जा गरे । साधन सम्पन्न, शीतल, समृद्ध, सुखी र स्वस्थ, दीर्घायु हुने र प्रशस्त सुन पाइने ठाउँहरूलाई त्यसताक स्वर्ग, सुरलोक, वैकुण्ठ आदि भनिन्थ्यो । सुमेरु, -पामीर) तियान सियान, त्रिविष्टप -तिब्बत) कास्मिर, सिरिया आदि थुप्रै ‘स्वर्ग’ थिए । राजा बलिले त्यस्तै महत्त्वका तीन लोक जितेका थिए ।
बलिले विष्णुको छल चिनेर पनि वाचा नतोड्ने वचन दिए । वामनले भने मलाई तपाईका स्वर्ग, मत्र्य र पाताल तीनवटै राज्य दिनुहोस् । किनभने तपाईं जस्ता महादानीका लागि यी तीन राज्य मामुली तीन पाइला जमिन जस्तै हुन् । वाचा हारेका बलिले भने मैले यी तीन लोक तपाईंलाई दिएँ । अब म बस्ने आश्रयस्थल तपाइर्ंले नै दिनुहोस् भनी खुट्टामा ढोगे । विष्णुले आˆनो मूल रूप देखाउँदै भने अब तिमी रसातलमा गएर बस Û देवता पक्षबाट कुनै खतरा भएमा म तिम्रो रक्षा गरुँला । यसरी महादानी बलिको तीनै लोकको राज्य स्वाहा भयो । विष्णुको छलले भएभरको सब कुरा गुमाएर बलि राजा भिखारी भएको देख्दा उनको उद्धार राज्य व्यवस्थामा बसेका जनता ज्यादै दुखी भए ।अनुश्रुति -दन्त्यकथा) भन्छ बलिको पुनर्वास व्यवस्था निम्ति सघाउन अनुमति लिएर हजारौं जनता चारैतिर छरिएर सबका घरघर पुगी सामूहिक स्वरमा सहयोग माग्न थाले
भनभन साथी हो – देहि श्री,
बलि राजाले पठाए – देहि श्री,
स्वर मिलाई भन – देहि श्री,
दानी राजाले पठाए – देहि श्री,
हामी त्यसै – देहि श्री,
आपत पर्‍यो – देहि श्री,
माग्न आएनौं – देहि श्री,
सहयोग गरौं – देहि श्री,
हामी कोही – देहि श्री,
जुटेर आयौं – देहि श्री,
स्वर्गबाट – देहि श्री,
घुम्दै आयौं – देहि श्री,
कोही हामी – देहि श्री,
जसले देला मानो – उसको सुनको छानो,
हामीकोही – देहि श्री,
सहयोग पायौं – भैलो
मत्र्यलोकबाट – देही श्री,
तपाईंको जयहोस् – भैलो
-धन दिनुहोस्) भन्दाभन्दै लोकलयमा ‘देउसिरे’ भयो ।
उसबेला त्यसरी जम्मा गरेको धन बलि कहाँ पुर्‍याइए होला । पछि क्रमशः यो मनोरन्जनको माध्यम भयो । मत्सेन्द्र नाथ जात्रामा भोटो देखाए जस्तो । पौराणिक कथा कति यथार्थ हो, कति काल्पनिक, तर कुनै राजा, राष्ट्राध्यक्ष, नेता, मन्त्री असल, विवेकी जनताको हित र उन्नतिमा लागिरहन्छ भने ऊ असुर, दानव, देव मानव जुनसुकै वंशको भए पनि उसलाई चाहे सत्तामा होस् चाहे बाहिर जनताले बलि राजालाई झैँ श्रद्धा, सम्मान र सहयोग गर्छन् । उसको कीर्ति युगयुग उज्यालो रहन्छ । यदि राजा नेता, मन्त्री स्वार्थी लोभी दमनकारी, जनघाती, देशमारा हुन्छन् भने सत्ताभित्र या बाहिर छँदा, बाँच्दा र मर्दा पनि उसलाई घृणाले थुकिरहन्छन् । पुराणकथाले भन्छ देवपक्षमा विष्णुले बलिलाई छलेर राज्य हड्पेका भए पनि बलिराजाको असीमित सुख्यातिले गर्दा पछि स्वयं रसातल पुगी बलिको पूर्ण सुरक्षाको व्यवस्था गरेका थिए ।
आधुनिक अनुसन्धाताहरूले स्वर्गलोक, मत्र्यलोक, पाताल, महापाताल आदिलाई पृथ्वीका विभिन्न भूभाग र द्वीपद्वीपान्तरका रूपमा समीकरण गर्दैछन् । सरदर पृथ्वीको कर्कट रेखा वरिपरिको भूभाग -प्राचीन सभ्यता विकसित भएका ठाउँ) लाई स्वर्ग समतुल्य, भूमध्ये रेखाबृत्तको गर्मी र कम उर्वर ठाउँ मत्र्य अपिका, अष्ट्रेलिया दक्षिण) अमेरिका आदिलाई पाताल रसातल, महापाताल आदि रूपमा परिभाषित गर्न खोज्दैछन् । अमरकोसले ‘बलिसद्म रसातलम्’ बलिको निवास रसातल हो ) भनेको छ । त्यो ठाउँ दक्षिण अफ्रिका, अष्ट्रेलया या त्यसैको समकक्षी कुनै टापू हुनसक्छ ।
साभार : मोदनाथ प्रश्रित, गोरखापत्र/मझेरी डट कम (Sat, 11/01/2008 – 07:01)
← श्रीकृष्ण र गीता धर्म
रामायणको समाजशास्त्र →
2 thoughts on “को थिए बलि राजा ?”
Pingback: यस्तो छ थाहा पाउनुहोस् काग तिहारभित्र लुकेको वैज्ञानिक पक्ष
Pingback: यस्तो छ थाहा पाउनुहोस् तिहारभित्र लुकेको वैज्ञानिक पक्ष